China High Quality Guide Wheel Ji Prefabricated Construction Machinery factory na ndị nrụpụta | Mingchang
1045 ma ọ bụ ngwaahia
Dị ka ịbịaru chọrọ (Iburu Isiokwu :)
Ibe ya bụrụ, Heat Ọgwụgwọ, CNC machining
Etinyere Prefabricated Construction Machinery
Mgbasi ike na iwe: ike: HB230-260
Ogologo Ogologo Oge: Ike: HRC45-50
Igwe ndubụ akụkụ dị mkpa eji na mgbakọ na-ewu machinery.In mmepụta akara, ọ na-bụ-eji maka ndu njem na nkwado nke die table. Ekwesịrị ikpebi usoro nrụnye nke ụkwụ ụkwụ na-eje ije dị ka ọnọdụ dị na saịtị ahụ si dị - gbanye H nchara ma ọ bụ wụnye bọọdụ ngosi.
Anyị na-eji nchara nchara dị elu iji kpuchie oghere, nke nwere ike ime ka ndụ ọrụ nke usoro mgbatị ahụ dị ogologo. Na nhazi usoro, anyị ga-eme nkwụsị na iwe iwe, nke mere na ike nke nzọ ụkwụ nwere ike iru HRC45, oke ike nwere ike iru HB230-260, nke na-ebu ikpo okwu site na nkenke nkenke, ntachi obi nwere ike iru 1 0.01mm. N'ikpeazụ, a ga-ekpuchi elu ahụ, elu ahụ mara mma ma nchara na - eguzogide.
Nke gara aga: High nkenke Nzipu Spline Spindle